Qalabka ugu Fiican WordPress
Qorshaha Kaabashada WordPress… Mid Ma Leh?
Axad, Sebtembar 18, 2011 Arbacada, Nofeembar 9, 2011 Douglas Karr
FIIRO GAAR AH: Tan iyo markii aan isticmaalay MyRepono, waxaan u wareegay VaultPress. Way ka qaalisan tahay laakiin waxay ku dhalatay WordPress (oo uu qoray Automattic) mana laha dhammaan arrimaha baakadka xiisaha leh ee MyRepono sameeyo.
Ma aanan haysan wax keyd ah oo keyd ah oo WordPress ah in muddo ah. Marka… markii ugu horeysay ee aniga lumiyay keydkeyga WordPress wuxuu ahaa riyo qarow! Waxay ahayd qalad aniga ii gaar ah… Waxaan ku sameynayay cusbooneysiin ku saabsan keydka macluumaadka waxaanan u tuuray xog-ururinta oo dhan shil. Waxaan la yaabay sida adduunka aan uga soo kaban lahaa qoraalladayda maaddaama aanan haysan kayd. Waan xanuunsanayay calooshayda maalintii oo dhan.
Waqtigaas, waxaan la jiray a marti kala duwan yaa, mahadsanid, lahaa soo celinta degdega muuqaalka goobta. Waxay ahayd soo celin qaali ah, oo igu kalliftay boqolaal doolar, laakiin weligayba waan ku mahadsanaa inaan awooday inaan helo dhammaantood laakiin qoraalkii ugu dambeeyay ee blog lagu soo celiyo 24 saacadood gudahood. Sannado ka dib waxaanan daabacnay in ka badan 2,775 qoraallo maqaal ah. Taasi waa xog badan (470Mb). Waa xog aad u tiro badan oo kaliya in lagu rakibo keydka cheapo oo aad filayso inuu maalin kasta shaqeeyo iyada oo aan wax dhibaato ahi ka jirin. Marka, waan raadiyay oo waan raadiyay ugu fiican WordPress keydinta plugin - waana helay.
Waan ogahay dad aad u tiro yar oo si toos ah ugu rakibay keydkooda shabakadooda… tani waxba kaagama tarayso markii martidaadu lumiso bartaada! Gacan ku taageerida WordPress sidoo kale waa xanuun maadaama aad u baahan tahay inaad keydiso feylasha iyo keydka xogta. Saaxiibadayda kale ayaa kaydiyay faylasha laakiin way dayaceen inay kaydiyaan kaydinta… taasi waa halka ay ka kooban yihiin dhammaan waxyaabahaagu! Waxaad u baahan tahay a WordPress keydinta plugin kaas oo isku daraya astaamahan oo dhan - iyo inbadan.
Waan rakibnay oo aan tijaabinnay myRepono, adeeg gurmad ah oo daruur ku shaqeeya. myRepono waa adeeg aad u fudud, oo kugu dalacaya bandwidth aad isticmaaleyso halkii aad ka qaadan laheyd ruqsad softiweer ah ama lacag bille ah oo weyn. Waa dinaar bille ah oo loogu talagalay bogagga yaryar waxayna ka hooseysaa 10 senti halkii keyd ah ee boggeyga.
Astaamaha MyRepono waxaa ka mid ah:
Kaydinta rakibida WordPress aan xadidnayn
Kaydinta dhammaan faylasha WordPress
Kaydinta keydka macluumaadka MySQL oo dhameystiran
Xaqiiji Sirta Faylka
Qalabka Soo Celinta Faylka
Maareynta Ku-saleysan Webka - waxaa laga heli karaa biraawsar kasta, meel kasta
Caawinta khadka tooska ah
Akhristayaasha blog Suuqgeynta way awoodaan iska qor myRepono maanta oo leh xiriiriyeheena xiriirka waxaadna heli doontaa amaah $ 5-kaaga ugu horreeya ee kaydinta. Taasi waa heshiis weyn! Fidinta ayaa qaadatay wax ka yar hal daqiiqo si loo rakibo loona dhigo.
Hal qoraal - kani waa nidaam aad ufiican oo loogu guuro boggaaga WordPress ama blog sidoo kale!
Kordhinta taraafikada 25kan Istaraatijiyadood ee la xaqiijiyay
Caadooyinka Eegashada Emailka ayaa si dhakhso ah isu beddelaya
Sep 19, 2011 at 7: 06 AM
Hagaag sifiican! Waxaan u maleynayaa inay dhamaanteen tahay inaan wax u barano dariiqa adag, miyaanay ahayn? Waxay u egtahay fikrad weyn.
Sep 20, 2011 at 8: 07 AM
Dabcan, haddii aad haysatid baloog Compendium ah, horey ayey ammaan u ahaan lahayd…
Sep 20, 2011 at 8: 50 AM
Run, kormeerid, xog ururin la'aanta keydka xogta iyo keydinta goobta ka baxsan ayaa ah astaamo aad u wanaagsan oo ah adeegga guud ee aadan si ku filan u qorin!
Nov 29, 2016 at 1: 14 AM
Waxaan u adeegsadaa BackupGuard si aan ugu kaydiyo boggeyga WordPress.Waa qalab weyn! https://wordpress.org/plugins/backup/